Jabuuti: Dhimasho & dhaawac ka dhashay qarax lala beegsaday baar caan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti – Mareeg.com: Wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegaya in laba qof ku geeriyoodeen tiro kale oo ajaaniib ahna ku dhaawacmeen qarax loo isticmaalay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay maqaayadda La Chaumiere oo ku taalla fagaaraha 27-ka June ee caasimadda dalka Jabuuti.
Diblumaasi diiday in magaciisa la xigto, ayaa warbaahinta u sheegay in labada qof ee geeriyooday ay ka shaqeynayeen maqaayaddda oo ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta ah ee ku nool magaalada Jabuuti.
Saraakiisha ciidanka booliska ee Jabuuti, ayaa ku howlan baaritaan ay ku sameynayaan warar sheegaya in qarax bombo gacmeed ah oo goobta lagu soo tuuray kadib uu qof ku sugnaa maqaayadda is-qarxiyey.
Wasaarada Arrimaha Gudaha Jabuuti ayaa warbixin horu dhac ah ka soo saartay qaraxyo xalay lala beegsaday maqaaxi ku dhow Hotel caan ah, iyadoo weerarka uu ahaa mid is qarxin ah oo ay fuliyeen labo ruux oo mid haweeey aheyd.
Warbixinta oo xalay laga sii daayay telefishinka Jamhuuriyada Jabuuti ee RTD oo gebi ahaanba barnaamijyadiisa la hakiyay ayaa labada ruux ee is qarxiyay la sheegay inay ka soo jeedeen Soomaaliya, midna ay haweeney aheyd.
Wadanka Jabuuti ayaa waxaa saldhigyo meleteri oo waaweyn ku leh wadamada Faransiiska iyo Mareykanka, waxaana gudaha Soomaaliya ku sugan ciidamo ka socda wadanka Jabuuti oo qayb ka ah howl-galka AMISOM.